News - Tiknoolajiyadda mustaqbalka waa aragti muuqaal ah: Caqli-galnimada carruurta ayaa lagu dhawaaqay "dib ugu noqoshada mustaqbalka 2 ″ maglev DeLorean time car
Maanta waa maalin caadi u ah dad badan, laakiin waxay u tahay maalin muhiim u ah taageerayaasha filimka caadiga ah “dib ugu laabo mustaqbalka 2 ″. Maanta waa maalintii Marty iyo Dr. Brown, halyeeyada sheekada, ay mustaqbalka ku laaban doonaan. Si loo xuso maalintan, alaabooyin badan oo durugsan oo la xiriira filimka ayaa la bilaabay midba midka kale.
Dhawaan, shirkad toy ah oo magaceeda la yiraahdo kids logic ayaa ku dhawaaqday baabuur waqtiga loo yaqaan 'DeLorean' ah oo leh saamayn ganaax ah si loo soo celiyo muuqaalkii caadiga ahaa ee filimka ee gaadhigu ku sii jeeday dirxiga. Badeecada oo dhami waxay u qaybsan tahay saldhig iyo nooca baabuurta ee DeLorean. Adoo adeegsanaya mabda 'levitation levitation, gaariga ayaa lagu hakiyay salka salka. Badeecada oo dhami waxay umuuqataa mid cilmiyaysan. Nasiib darrose, badeecadan lama iibin doono illaa rubuca saddexaad ee sannadka 2016 ugu horreyn. Sidaa darteed, waxay ku jirtaa oo keliya marxaladda iibka kahor xilligan. Haddii aad ujeeddo leedahay inaad iibsato, waxaad ka ballansan kartaa bogga animation-ka ee Taiwan. Si kastaba ha noqotee, qiimaha iibka rasmiga ah wuxuu u sarreeyaa 1600 doolar Hong Kong (qiyaastii 1310 yuan). Waa inaad sifiican uga fikirtaa intaadan gacmahaaga jarmin.
Saaxiibada filimka arkay dhammaantood way ogyihiin in qaabkani uu ku saleysan yahay nooca DeLorean dmc-12 ee filimka labaad ee taxanaha ah. Sarkaalka ayaa sheegay inuu 100% daacad u yahay filimka asalka ah dhanka soo saarista. Albaabka baalasha gull, mashiinka waqtiga iyo giraangiraha jirridda ayaa dhammaantood loo sameeyey si ay u noolaadaan. Qiyaasta moodeelku waa 1:20, markaa dhererka dhabta ah ee qaabkani waa 22 cm. Jirka gaariga waxaa ku rakiban in ka badan 10 nal oo LED ah, oo soo saari kara nalal dhalaalaya oo dhalaalaya. Ka dib markaad ka saarto salka xayiraadda magnetic-ka oo aad ku bedesho tusaalaha taayirrada caadiga ah, waxaa sidoo kale loo soo bandhigi karaa sidii moodel gaari caadi ah
Xiriirinta iibka kahor: iibso animation
Qiimaha rasmiga ah: 1600 doolar Hong Kong (qiyaastii 1310 yuan)